Trump - Kuma raacsani taagerayaashayda in Ilhaan la celiyo - BBC News Somali
Trump - Kuma raacsani taagerayaashayda in Ilhaan la celiyo
Trump on "Send her back": "I disagree with the chant"
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in taageereyaashiisa uusan ku raacsanayn dalabkooda ah in Ilhaan Cumar dib loogu celiyo Soomaaliya.
Dad tiro badan oo uu meel fagaaro kala hadlayay ayaa si wadar ah ugu dhowaaqayay erayada ah "dib u celi, dib u celi" kadib markii uu magaceeda ka xusay makarafoonka.
Waxa ay ka jawaabayeen hadal uu horey u jeediyay oo ahaa in Ilhaan iyo saddex hablood oo kale oo ay Congress-ka Maraykanka ku wada jiraan ay ku laabteen dalalkii ay asal ahaan ka yimaadeen.
Dadka Trump naqdiya ayaa sheegay in hadalada taageerayaasha Trump ay la midyihiin kuwii ay horey u yiraahdeen Hillary Clinton ee ay ku baaqayeen in xabsiga la dhigo kadib markii Trump uu ku eedeeyay in ay dambi ka gashay qaranka.
Ilhaan oo wariyeyaasha la hadlaysay ayaa tiri "Qofkasta oo dalkan ku nool waa uu ogyahay in hadalada Trump aysan ahayn kuwa la rumeysan kari, wuxuu muujinayaa afkaarihiisa fajiistenimada ah, isaga oo muwaadhiniinta Ameerikaanka ah ku wargalinaya in ay dalka ka baxaan, waxaan xusuusinayaa in Ameerika mucaaradnimada ay tahay sheey waddanimo ah, kala aragti duwanaanshahana lasoo dhoweynayo".
Dhanka Twitter-ka waxaa laga bilaabay olole hal ku dheg looga dhigay 'Ilhaan ayaan la jirnaa' ayaa aad u qabsaday, waxaana xitaa qeyb ka noqday siyaasiyiin badan.
Hoggaamiyaha Aqalka Sare ee xisbiga dimoqoraadiga Chunk Schumer ayaa Trump la bar dhigay hoggaamiyeyaasha kaligii taliska ah.
Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha xisbiga Jamhuuriga sida Tom Emmer oo ah guddoomiyaha guddiga ugu sareeya ee xisbigaas ayaa sheegay in Trump uusan ku waafaqsanayn ereybixinta uu isticmaalay.
Mooshin ka dhan ah Trump
Mooshinka ayaa lagu dhaleeceeyay "Haddalada cunsuriyadda ah ee lagu sharciyaynayo cabsi galinta iyo nacaybka dadka cusub ee Ameerikaanka ah iyo dadka midabka ah"
Dagaalka Trump iyo Ilhaan oo heer cusub gaaray
Madaxweyne Trump oo fariin soo dhigay dhegelkiisa Twitter-ka ayaa yiri "jirkayga kuma jirto laf cunsurinimo".
240 xildhibaan ayaa ku codeysay codka 'HAA' halka 187 xildhibaaan ay ku codeysay 'MAYA', taas oo ka dhigan in 4 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee Trump iyo waliba xildhibaanka kaliya ee madaxa banaan Justin Amash ay codkooda ku biiriyeen dimoqoraadiyiinta.
Waxaa xildhibaanadan ka mid ah ninka kaliya ee madoowga ah ee xisbiga Jamhuurigaka tirsan Will Hurd. Balse mooshinkaas kalsooni kala laabashada Trump ma aysan dhaqangalin.